नेपाली फिल्मको दसैं मोह- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
नेपाली फिल्मको दसैं मोह
आश्विन १७, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — नेपाली फिल्मका निर्माताका लागि दसैं रिलिजको मोह नयाँ हैन । पहिलेका दसैं निर्माता छविराज ओझाको पेवा जस्तै मानिन्थ्यो । उनले बर्सेनि दसैंकै छेको पारेर फिल्म प्रदर्शनमा ल्याउने गर्थे । अझ त्यस समय छविका फिल्ममा रेखा थापा नायिका हुने हुँदा हलमा दर्शकको ओइरो उस्तै लाग्थ्यो । छविको फिल्म दसैंमा आउने भएपछि अरु निर्माताले फिल्म रिलिज गर्ने हिम्मतसमेत गर्दैन थिए ।
पालो लगाएर फिल्म रिलिज गर्नुपर्ने नियम छँदा पनि छविले आफ्नो फिल्मको निर्माणभन्दा अघि रिलिज मिति निश्चित गर्थे ।
अहिले फिल्म प्रदर्शनमा पहिलेजस्तो पालो प्रणाली छैन । निर्माताले आफ्नो फिल्मलाई जुनसुकै मितिमा रिलिज गर्न पाउँछ । पालो प्रणालीको अन्त्यपछि नियमित फिल्म बनाएर बजार कब्जा गर्ने निर्माताहरू विस्तारै पाखा लागे भने दर्शकलाई आकर्षित गर्न सक्ने ल्याकत भएका फिल्म ब्यानर, सिरिज, निर्माता, निर्देशक वा कलाकारहरू शक्तिमा देखिए । बजार खुला भएपछि अहिले फिल्म प्रदर्शनका लागि उत्तम मानिने दसैंमा भिडन्त चर्किएर जान थालेको छ ।
यस वर्ष भने अप्रत्याशित रूपमा दसैंकै पूर्वसन्ध्या पारेर ठूला ब्यानरका फिल्म रिलिज भएनन् । जब कि गतवर्षको दसैंकै मितिका लागि मरिहत्ते गरेका निर्माताद्वय दीपकराज गिरी र अशोक शर्मा नै यसपटक दसैं छोडेर अघि र पछि लागे । शर्माले ‘रातो टीका निधारमा’ लाई घटस्थापनाअघि नै रिलिज गरे भने गिरीले ‘छ माया छपक्कै’ को रिलिजलाई टीकाको तीन दिनपछि सारे ।
दसैंको खास हप्ता मानिने फूलपातीपछिको बिदा भने विदेशी फिल्मका लागि चिठ्ठाजस्तै पर्‍यो । त्यसो त हिन्दी एक्सन फिल्म ‘वार’ आउने भएकै कारणले पनि नेपाली फिल्म निर्माताहरू हच्किएको बताइन्छ । अभिनेता तथा निर्माता गिरी भन्छन्, ‘ठूला ब्यानरका ठूलो बजेटका फिल्मलाई अब ठूलै संख्यामा हल र स्क्रिन चाहिने भइसक्यो । नत्र लगानी उठाउन कठिन छ । नत्र त हात्ती ल्याएर ढोकाबाट छिराउन खोजेको जस्तो मात्रै हुन्छ ।’
अघिल्लो दसैंमा दीपकराज र अशोकको नै रिलिज मितिलाई लिएर हानाथाप चलेको थियो । दीपकले ‘छक्का पन्जा ३’ र अशोकले ‘जय भोले’ लाई दसैंमा नै लगाउन हललाई दबाब दिनेदेखि आफ्नो पक्षमा माहोल जुटाउन न्वारनदेखिको बल लगाए । ‘छक्का पन्जा ३’ त ब्लकबस्टर्स हिट नै भइदियो । ‘जय भोले’ ले पनि राम्रै पैसा कमायो ।
कतिपयले त जय भोलेले छक्का पन्जा ३ को ओभरफ्लो (हल भरिएपछिको बाँकी दर्शक) खान पाएको समेत टिप्पणी गरे । त्यसैले पनि होला, यसपालि पनि यिनै दुई दसैंलाई लिएर फेरि भिड्न चाहे । तर बीचमा हिन्दी फिल्म वारको प्रवेशले दुईको भिडन्त छिन्नभिन्न पारिदियो ।
हुन त दीपकराजले कुनै बेला भनेका पनि थिए, हामीलाई फिल्म चलाउन दसैं नै पर्खिरहनु पर्दैन । फिल्म राम्रो छ भने जुनसुकै मितिमा रिलिज गरे पनि दर्शकले हेर्छन् नै । दर्शकले हेरेपछि स्वत:हिट हुन्छ । त्यही भएर पनि हो कि यसपालि दीपकराजले दसैं बिदाको खासै लोभ गरेनन् । यसपटक उनले प्रयोग नै गरेर जोखिम मोलिरहेका छन् ।
दसैंको बिदा खाने मोह नेपाली फिल्ममा यति धेरै छ कि आगामी वर्षको दसैं रिलिज अहिलेदेखि ओगट्न सुरु भइसकेको छ । अग्रपंक्तिमा फेरि देखिए, अशोक शर्मा नै । उनले ‘रातो टीका निधारमा’ फिल्मकै अन्त्यमा क्रेडिट लाइनसँगै २०७७ को दसैंमा ‘अल्लारे २’ लिएर आउने घोषणा नै गरिदिए ।
अशोक दसैं नै किन ताकिरहन्छन् त ? उनी यसका फाइदासहित भन्छन्, ‘मुख्यत:छुट्टी हुन्छ । छुट्टीमा सामान्य दिनमा भन्दा व्यवसाय एकदमै फरक पर्छ । त्यसमाथि दसैंमा दर्शकमा फेस्टिभ मुड हुन्छ । खुसियालीको माहोल हुन्छ । अरू बेला एक्लै एक्लै हलमा आउने दर्शक पनि यो बेला परिवारसहित आइरहेको हुन्छ ।’
कथा, पटकथा के हुने ? कलाकार कसलाई राख्ने ? छायांकनमा कहिले गएर सम्पादन कहिले सक्ने ? आदिइत्यादि थुप्रै प्रश्नको हल खोज्नु अगावै फिल्मको रिलिज मिति खोज्न मरिहत्ते चलाउनेमा यति बेला अशोक मात्रै छैनन् । बरु यो पंक्तिमा छड्के २ लिएर निगम श्रेष्ठ र जात्रा फेम निर्देशक प्रदीप भट्टराई पनि सामेल भएका छन् । निगमले राम्रो हाइप पाएर पनि चल्न नसकेको छड्केलाई सिक्वेलमार्फत् पुन:ब्युँताउन खोजेका छन् भने प्रदीपले महजोडी उर्फ मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई लिएर बनाउने फिल्मलाई दसैंमा नै ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् ।
तर गिरी दसैं भन्दैमा कमजोर फिल्म ल्याउँदैमा नचल्ने टिप्पणी गर्दै थप्छन्, ‘हामी धेरै फिल्मकर्मीमा दसैंले गर्दा फिल्म चलेको भन्ने ठूलो भ्रम छ । तर गलत फिल्म आयो भने फिल्म त फ्लप हुन्छ नै, त्यसले दर्शकको फेस्टिभ मुड पनि समाप्त पार्छ अनि फिल्म हेर्ने संस्कृतिलाई पनि असर पुर्‍याउँछ ।’ उनले यसपालि जोखिम मोलेरै दसैंपछि फिल्म रिलिज गर्न लागेको जिकिर गरे ।
प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०९:०५
गलैंचा सजाउने कला
काठमाडौँ — सामान्यत:हामी घरमा भुइँमा बिछ्याउन गलैंचाको प्रयोग गर्ने गर्छौं । तर त्यही गलैंचा कलाका लागि माध्यम पनि बन्न सक्दो रहेछ । सूर्य कार्पेटले ८० वटा गलैंचामा विभिन्न चित्रकला भरेर प्रदर्शनी नै गर्‍यो ।
कलाको विकास र महत्त्व बढाउने उद्देश्यले हातले नै बुनेका नेपाली गलैंचालाई नयाँ स्वरूप दिइएको सूर्य कार्पेटले जनाएको छ । कालिन ब्रान्ड नाम राखेर दोस्रो पटक यस्तो प्रदर्शनी गरिएको कम्पनीका सञ्चालक तथा चित्रकार नुरा श्रेष्ठले बताइन् ।
प्रदर्शनीमा रहेका सबै गलैंचाहरूमा मूर्त र अमूर्त कलाहरू समावेश थिए । आफ्नो सानैदेखिको चित्रकला प्रतिको झुकावका कारण दैनिक प्रयोगमा आउने गलैंचामा किन नगरौं भन्ने सोचाइले नै यतातिर लागेको श्रेष्ठले बताइन् । गलैंचाहरूमा पानी, आगो, पहाड र समुद्री सतहमा देखिने छालजस्ता पक्षहरूलाई चित्रण गरिएका छन् ।
गलैंचाहरूमा अधिकांश उज्यालो रंगको प्रयोग बढी गरिएको छ । फूलको आकृति होस् या पहाडको सबै उज्याला नै देखिन्छन् । बाघ, घोडाको शरीरको रूप देखाउन खोजेको गलैंचाहरूमा सामान्य रंगभन्दा केही गाढा उज्याला रंगका छन् । घरका भित्तामा झुन्ड्याएर राख्न बनाएका मण्डला, ‘थर्ड आई’ शीर्षकमा राखिएको महिलाको चित्रमा प्रयोग गरिएको रंगहरूको सन्तुलन संयोजन निकै कलात्मक लाग्छ । चित्रकार एरिना ताम्राकारको चित्र थर्ड आईलाई नै गलैंचामा प्रस्तुत गरिएको श्रेष्ठले खुलाइन् ।
बालबालिकालाई नै भनेर नेपाली गलैंचाहरू नभएकोले उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर तयार पारिएका गलैंचाहरू पनि निकै सुन्दर छन् । ‘नेपाली कला र सीप हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छन्,’ त्रिपुरेश्वरस्थित भगैन भिल्लामा भएको प्रदर्शनीबारे श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘नेपाली हातले बनाएका नेपाली गलैंचाको साथै हाम्रो नेपाली चित्रकलाको प्रवर्द्धन गर्न यो प्रदर्शनीले सघाउ पुर्‍याउन सक्छ ।’ उनका अनुसार घरको सौन्दर्य बढाउन र कलाप्रेमीका लागि पनि यो दोहोरो काममा प्रयोग हुन्छ ।
कला र हातको काम भएकोले मूल्यको हिसाबले विदेशी गलैंचाभन्दा अलि महंगो पर्ने हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न खासै नसकेको गलैंचा संस्थामा नै आवद्ध इन्द्रजित श्रेष्ठ बताउँछन् ।
प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०९:०३
एनसीबीद्वारा लागूऔषध मामिलामा दीपिका, साराअली र श्रद्धालाई 'क्लिन चिट'
कंगनाको राजनीतिक बोली !
साउन्ड डिजाइनर उत्तमको नामको पछाडि अब 'सिएएस'
‌ओस्कार अवार्डका लागि आवेदन खुला
बयान दिँदा भावुक बनेकी दिपिकालाई एनसीबीले भन्यो, 'इमोस्नल कार्ड' नखेल्नुस्
ड्रग्स मामिलामा दीपिका, सारा र श्रद्धा एनसीबीमा, सोधपुछ गरिँदै
अपडेटः बुधबार, १४ असोज, २०७७ । २२ : १० बजे
कांग्रेसमा आन्तरिक रगडा
किशोर नेपाल आश्विन १४, २०७७
आगामी फागुन ७ गते प्रारम्भ हुने भनिएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने लगभग निश्चित छ । कोरोना महामारीका कारण महाधिवेशन जेठमा सार्ने, त्यो सम्भव...
हाम्रा विश्वविद्यालय तथा कोभिड–१९
कृष्णराज तिवारी आश्विन १४, २०७७
नेपालको उच्च शिक्षामा राजनीतिक विकृति–विसंगतिको छाया परेको पर्‍यै छ । उच्च शिक्षालाई पार्टीकरणले तहसनहस पारिरहेकै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा २०४६ को आन्दोलनपछि स्वतः स्थायी हुन...
डिला संग्रौला आश्विन १४, २०७७
सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व लिने लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको संघारमा छ । अनेकौं आरोह–अवरोह पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म...
न्यायिक कठघरा र दलित सेल
परशुराम रम्तेल आश्विन १४, २०७७
भनिन्छ, बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ । नागरिकले शान्ति–सुरक्षा, अमनचैन र न्याय पाउने कुराको सुरुआत प्रहरी प्रशासनबाटै हुने गर्छ । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको १३ वर्ष र छुवाछूत ऐन...
एसिड प्रहार रोक्न सरकारको सकारात्मक पहल
सम्पादकीय आश्विन १४, २०७७
एसिड अपराध रोक्न सरकारले अध्यादेशमार्फत आक्रमणकारी र अनधिकृत विक्रेतालाई कडा कारबाही गर्ने प्रबन्धसहितको नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर सकारात्मक पहल लिएको छ । यो प्रयत्नलाई उपलब्धिमूलक बनाउन...
अवनिभूषण उपाध्याय आश्विन १३, २०७७